Akụkọ - A na -etinye usoro isi ihe na ngalaba Qingdao
A na -etinye usoro isi ihe na ngalaba Qingdao
Mmepụta mmekorita bụ usoro njikwa dị irè maka ụlọ ọrụ ahụ, ka ndị ọrụ kwụrụ ụgwọ ghara ịta ahụhụ, wee kpalie ịnụ ọkụ n'obi nke ndị ọrụ. Enwetara ezigbo nsonaazụ kemgbe etinyere ya n'isi ụlọ ọrụ. Alaka Qingdao, dị ka ngalaba guzobere n'afọ a, etinyerela njikwa sistemụ isi n'okpuru Maazị Zhang kemgbe ọrụ ụlọ ọrụ ahụ, wee rụpụta ezigbo ihe.
N'August 5th, e mere nzukọ ịja mma njikwa ngalaba Alaka Qingdao. N'ọnwa Julaị, Wang Jingyi bụ onye mbụ na akara ahụ, Liu Tingting so na azụmaahịa ụlọ, yana Shen Xiuling n'ọkwa nke atọ n'ịzụ ahịa ụlọ. Onye isi oche ụlọ ọrụ ahụ, Maazị Han, nyere ndị ọrụ ibe atọ kacha elu na ngalaba Qingdao ihe nrite ọla edo, ọla ọcha, na ọla.
Maazị Zhang kwupụtara ụgwọ ọrụ maka ndị ọrụ ibe atọ kachasị elu. Onye isi oche Qi nke isi ụlọ ọrụ ahụ kesara ndị ọrụ ibe ndị ọzọ nwetara akara wee malite tiketi lọtrị nke nwere isi ihe ma webata ojiji tiketi lọtrị. Maazị Han na ndị ọrụ ibe ya sitere na ngalaba Qingdao kesara atụmatụ ụlọ ọrụ ahụ n'ọdịnihu, ma gbaa ndị ọrụ ibe niile ume ka ha na -egwuri egwu nke ọma, gosipụta nkà ha n'elu ikpo okwu Longhua, rụsie ọrụ ike, ma rụpụta ihe ka ukwuu.
A na -etinye usoro isi ihe na ngalaba Qingdao. Site na nlekọta na enyemaka nke ndị isi ụlọ ọrụ, ndị ọrụ alaka ụlọ ọrụ Qingdao ga -etinye onwe ha n'ọrụ na -abịa n'ihu wee gbalịsie ike maka mmepe nke ụlọ ọrụ ahụ na echiche dị mma na oke ịnụ ọkụ n'obi!
Oge ezipụ: Jun-18-2021